प्रत्येक नारिहरुले पढ्नैपर्नै मनछुने कथा मुम्वईको कोठी - सुदूरखबर डटकम
प्रत्येक नारिहरुले पढ्नैपर्नै मनछुने कथा मुम्वईको कोठी
label समाचार प्रकाशक query_builder November, 21 2018
लेखक:- दियु पौडेल
मेरिडिन सुन त ..?
किन यसरी एकोहोरो हिंडिरहेकी ?
आलिकले उसलाई निकै आग्रह गर्यो !
मेरिडिन ज्योतिषले होईन आलिकलेे राखेको नाम थियो !
मेरिडिन अगाडी टक्क उभिई अनि भनि किन रोकिनु…?
फेरीपनि मेरिडिनले आफ्नो गति छाडिन ..आलिक पछि पछी लागिरहेको थियो !
वर्षादको वादलमा आकाशको गर्जन र अधेरिंदै डुव्न लागेको घाम ..केहि समयपछी
चौपट्ट अध्यारोमा जुनकिरीको मन्द उज्यालो प्रकाशमा रुमलिंदै आलिकले मेरिडिन संग हात जोड्दै भन्यो मलाई छाडेर नजाऊ मेरिडिन ..पिलिज..मेरो तिमी वाहेक कोहि छैन,तिम्रो अनुपस्थितीमा म मर्न सक्छु ..मेरिडिनले आफ्नो जिद्धि छाडिन..
तिमी को हौ र आलिक ..जव एउटी पत्नीलाई पनि पाल्न नसक्ने नामर्द संग म कसरी वसुँ..भोक र प्यासले कति दिन तड्पिउँ …तिमीले दिनहुँ गोरु जोतेपनि न मानो फल्छ न कतै आउने वाटो छ..जव सुख दिन सक्दैनौं भने किन विवाह गर्नु .. फेरी पनि म तिमी संगै वस्नु पर्ने ..म तिमीसंग खुशि हुन सक्दिन आलिक मेरिडिनले चर्को आवाजमा भनि !
आलिक एउटा रुखको साथ लिएर रोईरह्यो ..आँशुहरु वाहिर वगेर नदिझैं वन्दै आफ्नो वग्ने वाटो खोज्दै थिए !
मेरिडिन हेर्दा हेर्दै निकै पर पुगिसकेकी थिई !
आलिक रुँदै त्यो सॉझ घर गयो !
टेवुलमा राखेको एक गिलास पानी पियो अनि अंखोराको पानीले मुख धोयो !
राति सुत्न खोज्दा आलिकलाई पटक्कै निन्द्रा लागेन उसले मेरिडिनको यादमै किस गर्यो अनि यादमै उसका केशराशीहरु सुम्सुमायो !
मेरिडिन सुख खोज्न सहर जान्छु भनेर हिंडेकी एक जिद्धि आलिककी पत्नी थिई !
पारि गाउंमा मन्द वासुरीको धुन वजिरहेको थियो !
सुस्त सुस्त यादलाई विर्सने कोसिस गर्दै निदाउने कोसिस गर्यो .तर कहॉ सक्थ्यो र आलिक निदाउन उसलाई समय र आफ्नाले एकैसाथ चोट दिएका थिए !
त्यो रात मुरलीको धुन सुन्दै रोईरहेको आलिकको मनमा घाऊका धेरै झिंगाहरु फैलिरहेका थिए !
मेरिडीन ऊ सपनामै वोलायो अनि सपनामै डरायो..जसलाई प्रेम गरेपनी यो प्रेमको अदालतमा धनमा विक्ने प्रेमको टुसाहरु मौलाएर गरिवीको मायॉ सस्तैमा विक्दो रहेछ !
मेरिडीन माईतमा वस्न थाली ,उसको भाई र दाजु अनि वुढा वुढी भएका वुवा आमा वाहेक त्यो घरमा कोहि थिएन…मेरिडिन तीमी कसरी ज्वाईलाई छोडेर आयौ
भित्र गएकी छोरीलाई आमाले सम्झाईन तर मेरिडीनले रोएरै जिति अनि आफ्नो ढिपी छाडिन…!समयको गति निकै चॉडो कुद्ने गर्छ हेर्दा हेर्दै मेरिडिनले आलिकलाई छाडेको २ साल पुरा भैसकेको थियो !
एकदिन मेडिनलाई उसकै मुम्वईमा वस्ने सानिमाले मुम्वई लिएर जानेभई ..काम लगाउँछु भन्दै हींडेकी ऊ एकचोटी यत्तिकै रिसाएर छुटेको आलिकको फोटो हेरी..ऊ अझै मौन थियो अनि उसको फोटो लाई घरको भित्तामा कॉटी ठोकेर झुन्ड्याई ..!
दुई कॉटीको विचमा आलिकको फोटो झुन्डिएको थियो !
हेर्दा हेर्दै मेरिडिन रेल चढी .पहिलो चोटी रेल चढ्दा उसलाई निकै आनन्द लागेको थियो !
वाहिरको दृश्यहरु एका-एक हिंडिरहेका थिए !
छेऊमै वसेकी सानिमालाई कोट्याई र भनि सानी आमा त्यो पहाड कति राम्रो …सानिमाले मन्टो हल्लाऊँदै गई..सानिमाले चस्मा राम्रो लगाएपनी त्यसभित्रको ऑखामा शंखा गर्नुपर्छ ..हुन त चस्माले अपराधलाई कसरी छेक्न सक्छ र?
मुम्वईको त्यो शहर शहर जस्तै थियो वाहिरी रुप भित्रका मानिसहरु त्यही छल-कपटवाट उव्जिएका विऊ हुन्..!
मेरिडिनलाई आलिक भएकोमा र नभएकोमा कुनै असर थिएन..!
मुम्वई भायखोला,दादर कुर्ला एक्लै एक्लै घुमिरहेकी थिई …!
एकदिन मुम्वई अधेंरीमोड नजिकै केही गुन्डाहरु उसको पछी लागे र अधेरीमोडको पार्क नजिकैवाट मेरिडिनलाई ति गुन्डाहरुले समाते अनि उसलाई वेश्यालयमा राख्नको लागी लिएर गए !
ति गुन्डाहरुले वेश्यालयमा पुराएपछी केही रकम ति वुढी देखीएकी आईमाईवाट लिंदा रहेछन् !
ति आईमाई अरु कोही थिएन आफ्नै सानिमाको साथि थिईन..उनको विजनेसको रुपमा यस्तो धन्दा गर्दिरहिछन् !
सानिमा पनि त्यही देखेपछी..
मेरिडिनले उनकी सानिमालाई मुखमा थुकिन र भनिन तिम्रो भर परेर यहॉ आएकी थिँए ..तिमी पापीनी रहिछौ सानीमा …मेरो जिन्दगी नर्कमा पारिदियौ…!
सानिमा मौन थिईन उनले भनिन् के गर्छेस् तनि छोरी यहॉ केही कमाउँछेस् अनि घर जानु !
यता आलिकको विजोग भैरहेको थियो ,उसलाई सवैको हेप्दै गए !
रिनको व्याज थेक्न नसकेर आलिक पनि मुम्वई जाने भयो !
असारको महिना थियो सिमसिम पानी परिरहेको थियो !
आलिक वुटवल हुँदै सुनौली र गोरखपुर पुगेर मुम्वईको रेल टिकट काट्यो !
गोरखपुरवाट रेल चढेको आलिकको मनमा निकै प्रश्नहरु उव्जिएको थियो !
उसले मेरिडिनलाई सम्झियो अनि ऑखावाट आॉशुका केही गरीवी आशुहरुलाई धिकार्दै पुच्छ्यो र रेलको जर्नल डिव्वाको A सिटैमा नजिकै वसेकी एउटी वृद्ध महिलालाई हेर्यो …उसका गालाका केही चाहुरीपन र गलेका शरिरलाई नियाल्यो अनि आफ्नो हातका छालाहरुमा नियाल्दै हेर्यो ..सोच्यो म अझ्यौ जवानको पराकाष्ठामा वॉच्नुपर्छ !
एकपटक लामो सास फेर्यो र वाहिर नियाल्यो ..!
क्रमश:- ( वॉकी अर्को भागमा )
तपाईहरुलाई कथा कस्तो लाग्यो #प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला !
मन परेमा #शेयर गरि आफ्नो वालमा सुरक्षित राख्नुहोस् !
मसंग मित्रता गर्न चाहने असल मित्रहरुले मलाई फेशवुकमा एड वा fallow गर्न सक्नुहुनेछ !